/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/Sunitinib Malate အကြောင်းမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - AASraw
အပေါ် Posted 06 / 09 / 2021 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
Sunitinib Malate ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Sunitinib Malate ကိုဘာတွေသုံးလို့လဲ။
Sunitinib Malate အလုပ်လုပ်ပုံ?
Sunitinib Malate ကိုဘယ်လိုသောက်ရမလဲ။
Sunitinib Malate သိုလှောင်နည်း
Sunitinib Malate ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုကျွန်ုပ်တို့မည်မျှသိရှိနိုင်ပါသနည်း။
Sunitinib Malate ကိုအခြားမည်သည့်ဆေးဝါးများကလွှမ်းမိုးမည်နည်း။
FDA မှ Sunitinib Malate ကိုကျောက်ကပ်ဆဲလ်ကင်ဆာရောဂါကုသရန်အပိုအဖြစ်ကုသရန်အတည်ပြုလိုက်သည်
Sunitinib Malate အွန်လိုင်းကိုဘယ်မှာဝယ်လို့ရသလဲ။
Sunitinib Malate (CAS:341031-54-7) ပရိုတိန်း kinase inhibitors ကိုရှေ့ဆောင်တဲ့ဇီဝနည်းပညာကုမ္ပဏီ SUGEN မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ SU5416 နှင့် SU6668 အပါအ ၀ င်ဒြပ်ပေါင်းများစွာတွင်တတိယမြောက်ဖြစ်သည်။ အဲဒီသဘောတရားက ATP တုပခြင်းဖြင့် ATP နဲ့ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီးအဲဒီ receptor tyrosine kinases ရဲ့ catalytic site ကိုချိတ်ဆက်ပေးတယ်။ ဤအယူအဆသည် Gleevec, Sutent, Tarceva နှင့်အခြားများစွာသောသေးငယ်သည့်မော်လီကျူး tyrosine kinase inhibitors များစွာကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
Sunitinib Malate သည်အဝါရောင်မှလိမ္မော်ရောင်အမှုန့်ဖြစ်သည်။ Sunitinib Malate သည်မော်လီကျူးသေးငယ်သောပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည် အဲဒီ receptor tyrosine kinase (RTK) inhibitor ။ ၂ ဝဝ ၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၆ တွင်အမေရိကန် FDA မှကျောက်ကပ်ဆဲလ်ကင်ဆာရောဂါကုသမှုနှင့် imatinib-gastrointestinal stromal အကျိတ် (GIST) ကိုတရားဝင်အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်များအတွက် Sunitinib Malate ကိုယေဘုယျအားဖြင့်နှုတ်ဖြင့်စီမံထားသောဖော်မြူလာအဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။ Sunitinib Malate သည် RTK အမြောက်အမြားကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့်ဆယ်လူလာအချက်ပြမှုကိုတားဆီးသည်။ ဤရွေ့ကားအားလုံး platelet- ဆင်းသက်လာကြီးထွားမှုအချက် receptors (PDGF-R) နှင့်သွေးကြော endothelial ကြီးထွားအချက် receptors (VEGF-R ကို) တို့ပါဝင်သည်။ Sunitinib Malate သည် GISTs အများစုကိုမောင်းနှင်သော RTK KIT (CD26) ကိုတားစီးသည်။ ထို့အပြင် Sunitinib Malate သည်အခြား RTK များကို RET, CSF-2006R နှင့် flt117 အပါအဝင်တားစီးပါသည်။
Sunitinib Malate သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမပြန့်ပွားသေးသော (ဒေသအလိုက်) ကျောက်ကပ်ကင်ဆာရှိသူများနှင့်ကျောက်ကပ်ခွဲစိတ်မှုခံယူပြီးနောက်နောက်တစ်ခါ RCC ပြန်လာနိုင်သည့်အန္တရာယ်များကိုကုသရန်အသုံးပြုသည်။
Sunitinib Malate ကိုကျောက်ကပ်ကင်ဆာ (အဆင့်မြင့်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာဆဲလ်ကင်ဆာရောဂါ) ကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။
Sunitinib Malate ကိုအစာအိမ်၊ အူသိမ်သို့မဟုတ်အစာပြွန်၏ရှားပါးသောကင်ဆာကုသရာတွင်အသုံးပြုသည် အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်း stromal အကျိတ် (GIST) နှင့်သင်ဆေးဝါးကို imatinib mesylate ကိုယူသောအခါ၎င်းသည်ကင်ဆာကိုကြီးထွားစေခြင်းအားမရပ်တန့်စေနိုင်သကဲ့သို့သို့မဟုတ်သို့မဟုတ်သင် imatinib mesylate ကိုမသောက်နိုင်သည့်အခါ။ Gleevec သည် Novartis ဆေးဝါးကော်ပိုရေးရှင်း၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။
Sunitinib Malate သည်ပန်ကရိယ neuroendocrine မြင်းသရိုက်အနာ (pNET) ဟုခေါ်သောပန်ကရိယကင်ဆာအမျိုးအစားကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ခွဲစိတ်ကုသမှုမခံယူနိုင်ပါ။
Sunitinib Malate သည်အကျိတ်ကြီးထွားမှု၊ ရောဂါဗေဒ angiogenesis နှင့်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုများတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သော receptor tyrosine kinases မျိုးစုံရှိသည့်မော်လီကျူးအသေးစားကိုတားဆီးပေးသည်။ အဆိုပါPDGFRαနှင့်PDGFRβ၊ vascular endothelial growth factor receptors (VEGFR1, VEGFR2 နှင့် VEGFR3)၊ Stem Cell factor receptor (KIT), FMS ကဲ့သို့သော tyrosine kinase 3, ကိုလိုနီ - လှုံ့ဆော်အချက်အချက်။ အမျိုးအစား 1 နှင့် glial ဆဲလ်လိုင်း neurotrophic အချက်အဲဒီ receptor (RET) ဆင်းသက်လာ။ ဤအ receptor tyrosine kinases ၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့် function ကို Sunitinib Malate တားစီးမှုကိုဇီဝဓာတုဗေဒနှင့်ဆယ်လူလာစစ်ဆေးမှုများနှင့်ဆဲလ်များပြန့်ပွားခြင်း assay တွင်ပြသခဲ့သည်။ Sunitinib Malate ၏အဓိက metabolite သည်ဇီဝဓာတုဗေဒနှင့်ဆယ်လူလာစစ်ဆေးမှုများရှိမိဘဒြပ်ပေါင်းနှင့်အလားတူစွမ်းအားကိုပြသသည်။
Sunitinib Malate သည်အကျိတ် xenografts တွင်အမျိုးမျိုးသော receptor tyrosine kinases (PDGFRβ, VEGFR2, KIT) ၏ phosphorylation ကိုတားဆီးပေးပြီးအချို့သောနမူနာမော်ဒယ်များတွင်အကျိတ်ကြီးထွားမှုနှင့် metastasis ကိုတားဆီးသည်။ အဆိုပါအေးဂျင့် Vivo အတွက်စသည်တို့နှင့်PDGFRβ-နှင့် VEGFR2- မှီခိုအကျိတ် angiogenesis အတွက် dysregulated ပစ်မှတ်အဲဒီ receptor tyrosine kinases (PDGFR, RET, ဒါမှမဟုတ် KIT) ကိုဖော်ပြအကျိတ်ဆဲလ်များ၏ကြီးထွားမှုကိုတားစီး။
သင်၏ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့် Sunitinib Malate သောက်သုံးသောပမာဏသည်အကြောင်းများစွာအပေါ်မူတည်သည်။ ဤရွေ့ကားပါဝင်သည်:
Sun သင် Sunitinib Malate ကိုကုသရန်အသုံးပြုနေသောအခြေအနေနှင့်အမျိုးအစား
အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည်များသောအားဖြင့်အသုံးပြုသော (သို့) အကြံပြုသောဆေးများကိုဖော်ပြသည် သို့သော်သင့်ဆရာဝန်ကသင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်ဆေးကိုသောက်ရန်သေချာစေပါ။ သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီအကောင်းဆုံးဆေးညွှန်းကိုသင့်ဆရာဝန်ကဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
Sunitinib Malate သည်သင်မျိုချလိုက်သည့်ဆေးတောင့်တစ်ခုအနေဖြင့်လာသည်။ ၎င်းအားသာချက်များကိုရရှိနိုင်သည်။ ၁၂.၅ မီလီဂရမ် (mg)၊ ၂၅ မီလီဂရမ်၊ ၃၇.၅ မီလီဂရမ်နှင့် ၅၀ မီလီဂရမ်။
အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်း stromal မြင်းသရိုက် (GISTs) အတွက် Sunitinib Malate ၏ပုံမှန်သောက်သုံးမှုသည်တစ်ပတ်လျှင် ၅၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ ၄ ပတ်ကြာသည်။ နောက် ၂ ပတ်အကြာတွင်ဆေးမသောက်ဘဲနေရသည်။ ထို့နောက်သင်သံသရာကိုပြန်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်၏ကင်ဆာပိုဆိုးလာသည်အထိသို့မဟုတ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကဆေးဝါးဖြင့်ကုသမှုကိုသည်းမခံနိုင်သည့်တိုင်အောင် Sunitinib Malate ကိုသင်ဆက်လက်သောက်သုံးနိုင်သည်။ Sunitinib Malate ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မသောက်ရန်သင့်ဆရာဝန်ကဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ GITs များကုသရာတွင် Sunitinib Malate အသုံးပြုပုံကိုအသေးစိတ်သိလိုပါကအောက်ပါလင့်ခ်တွင်ကြည့်ပါ။
Sunitinib Malate ကိုကျောက်ကပ်ကင်ဆာအမျိုးအစားကိုအဆင့်မြင့်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာဆဲလ်ကင်ဆာရောဂါ (RCC) ဟုလည်းခေါ်သည်။ အဆင့်မြင့် RCC အတွက် Sunitinib Malate ၏ပုံမှန်သောက်သုံးမှုသည်တစ်ပတ်လျှင် ၅၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်ပြီး ၄ ပတ်ကြာသည်။ နောက် ၂ ပတ်အကြာတွင်ဆေးမသောက်ဘဲနေရသည်။ ထို့နောက်သင်သံသရာကိုပြန်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်၏ကင်ဆာပိုဆိုးလာသည်အထိသို့မဟုတ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကဆေးဝါးဖြင့်ကုသမှုကိုသည်းမခံနိုင်သည့်တိုင်အောင် Sunitinib Malate ကိုသင်ဆက်လက်သောက်သုံးနိုင်သည်။ Sunitinib Malate ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မသောက်ရန်သင့်ဆရာဝန်ကဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ အဆင့်မြင့် RCC ကုသရာတွင် Sunitinib Malate အသုံးပြုပုံနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link ကိုကြည့်ပါ။
kid ကျောက်ကပ်ကင်ဆာကို adjuvant ကုသမှုအတွက်သောက်သုံးသော
Sunitinib Malate ကို nephrectomy (ကျောက်ကပ်ကိုခွဲစိတ်ကုသမှုအပြီး) ပြီးနောက် RCC ဟုခေါ်သောကျောက်ကပ်ကင်ဆာတစ်မျိုးအတွက် adjuvant ကုသမှုအဖြစ်လည်းအသုံးပြုသည်။ ပုံမှန်အတိုင်း ၏သောက်သုံးသော Sunitinib Malate ဒီအသုံးပြုရန် 50 ပတ်ကြာတစ်နေ့လျှင်4mg ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ၂ ပတ်အကြာတွင်ဆေးမသောက်ဘဲနေရသည်။ သငျသညျပုံမှန်အားဖြင့်ဤသံသရာကိုးကြိမ်ပြန်လုပ်ပါလိမ့်မယ် Sunitinib Malate ကို RCC အတွက်အထူးကုသမှုအဖြစ်မည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုအသေးစိတ်သိလိုပါကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link ကိုကြည့်ပါ။
အဆင့်မြင့်ပန်ကရိယ neuroendocrine အကျိတ်များ (pNETs) အတွက် Sunitinib Malate ၏ပုံမှန်သောက်သုံးမှုသည်တစ်နေ့လျှင် ၃၇.၅ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။
သင်၏ကင်ဆာပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြင့်ကုသမှုကိုသည်းမခံနိုင်သည့်တိုင်အောင် Sunitinib Malate ကိုဆက်လက်သောက်သုံးနိုင်သည်။ Sunitinib Malate ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မသောက်ရန်သင့်ဆရာဝန်ကဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
မှတ်ချက် - ဤဆေးညွှန်းသည်ရည်ညွှန်းခြင်းသာဖြစ်သည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အားဖြင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးရန်ကူညီပေးပါ။www.fda.gov .
AASraw သည် Sunitinib Malate ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
က လာ. ကွန်တိန်နာ, တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပိတ်ထား၌၎င်း, သားသမီးများ၏လက်လှမ်းမမီထဲကဒီဆေးထားပါ။ အခန်းအပူချိန်မှာသိုလှောင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ဝေးပိုလျှံအပူနှင့်အစိုဓာတ်ကနေ (မရေချိုးခန်းအတွက်) ။
ဒါဟာအဖြစ်အများအပြားကွန်တိန်နာမျက်မှောက်ထဲကအားလုံးဆေးဝါးစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သားသမီးများ၏ရောက်ရှိရန်အရေးကြီးပါသည် (ထိုကဲ့သို့သောအပတ်စဉ်ဆေးလုံး minders အဖြစ်နှင့်မျက်စိအဘို့သူတို့အားပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်, လိမ်းဆေး, ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများနှင့်ရှူရှိုက်မိပါ) ကလေးခံနိုင်ရည်မဟုတ်နှင့်လူငယ်ကလေးများအလွယ်တကူသူတို့ကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ အဆိပ်သင့်ခြင်းမှကလေးငယျမြားကိုကာကှယျရနျ, အစဉ်အမြဲဘေးကင်းလုံခြုံမှုထုပ် lock နှင့်ချက်ချင်းလုံခြုံတည်နေရာအတွက်ဆေးဝါးနေရာ - တက်နှင့်ဝေးအချိန်၌သူတို့မျက်မှောက်ထဲကနှင့်ရောက်ရှိကြောင်းတပါးတည်း။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၊ ကလေးများနှင့်အခြားလူများကသူတို့ကိုမစားသုံးနိုင်အောင်မလိုအပ်သည့်ဆေးများကိုအထူးနည်းလမ်းများဖြင့်စွန့်ပစ်သင့်သည်။ သို့သော်၊ ဤဆေးကိုအိမ်သာထဲသို့မတင်သင့်ပါ။ အဲဒီအစား, သင်၏ဆေးဝါးစွန့်ပစ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဆေးဝါးပြန်လည်ယူအစီအစဉ်အားဖြင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏ရပ်ကွက်ရှိပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်များအကြောင်းလေ့လာရန်သင်၏ဆေးဝါးဆရာနှင့်ပြောဆိုပါသို့မဟုတ်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာအမှိုက်သရိုက် / ပြန်လည်အသုံးချဌာနကိုဆက်သွယ်ပါ။ FDA ၏အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဖယ်ရှားခြင်းကိုကြည့်ပါ ဆေးဝက်ဘ်ဆိုက် သငျသညျ take- ပြန်ပရိုဂရမ်ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်။
Sunitinib Malate ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များကိုအတော်အတန်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီးဆိုးရွားသည့်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပွားမှုနည်းပါးပါသည်။
Sunitinib Malate ကုထုံးနှင့်ဆက်စပ်သောအဖြစ်အများဆုံးအဖြစ်အပျက်များမှာပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ပျို့ချင်ခြင်း၊ မကြာခဏ Sunitinib Malate နှင့်မကြာခဏဆိုသလိုရလဒ်များအရအိပ်ယာထက်ဝမ်းလျှောခြင်း၊ anorexia၊ အရေပြားအရောင်ပြောင်းခြင်း၊ mucositis / stomatitis, asthenia, အရသာပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ချုပ်နှောင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ဒီအေးဂျင့်၏သိသိသာသာအဆိပ်အတောက်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အလို့ငှာ RCC ၌လေ့လာခဲ့သောလူနာများ၏ ၅၀% တွင်ဆေးများလျှော့ချရန်လိုအပ်သည်။
ပြင်းထန်သော (အတန်း ၃ မှ ၄) ဆိုးရွားသည့်ဆိုးကျိုးများသည်လူနာ၏ ၁၀% တွင်ဖြစ်ပွားပြီးသွေးတိုးရောဂါ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ astenia၊ ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့်ဓာတုကုထုံး - သွေးဆောင် acral erythema တို့ပါဝင်သည်။ Sunitinib Malate ကုထုံးနှင့်ဆက်နွယ်သောဓာတ်ခွဲခန်းပုံမှန်မဟုတ်သောအရာများတွင် lipase, amylase, neutrophils, lymphocytes နှင့် platelets များပါဝင်သည်။ Hypothyroidism နှင့်ပြောင်းပြန် erythrocytosis လည်း Sunitinib Malate နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များကိုထောက်ပံ့ကူညီမှု၊ ဆေးဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်လျှော့ချခြင်းမှတစ်ဆင့်စီမံနိုင်သည်။
MD Anderson ကင်ဆာစင်တာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ Sunitinib Malate ကို (၂ ပတ်အတွင်းရက်သတ္တပတ် ၅၀ မီလီဂရမ် / ၄ ပတ်မှရက်သတ္တပတ် ၅၀ မီလီဂရမ်) ရရှိသော metastatic ကျောက်ကပ်ဆဲလ်ကင်ဆာလူနာများ၏ရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုအရ Sunitinib Malate ကိုမကြာခဏနှင့်တိုတောင်းသောအားလပ်ရက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ (အခြားရွေးချယ်စရာအချိန်ဇယား) ။ Sunitinib Malate ကိုအခြားအချိန်ဇယားအတိုင်းလက်ခံရရှိသောလူနာများအနေဖြင့်ယေဘုယျရှင်သန်မှု၊ တိုးတက်မှုမရှိသောရှင်သန်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလိုက်နာမှုနှုန်းသည်သိသိသာသာမြင့်မားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ လူနာများမှာပိုမိုကောင်းမွန်သောသည်းခံစိတ်ရှိခြင်းနှင့်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပွားမှုနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် metastatic renal cell ကင်ဆာလူနာများကိုမကြာခဏကုသမှုကိုရပ်တန့်စေနိုင်သည်။
Sunitinib Malate သည်နှလုံးရောဂါဖြစ်စေနိုင်သည်။ စိတ်ကျရောဂါ၊ စိတ်ရောဂါ၊ ကင်ဆာ၊ ငှက်ဖျားသို့မဟုတ်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးများအတွက်အခြားဆေးများကိုအသုံးပြုပါကပိုမိုအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံတစ်ချိန်တည်းတွင်အချို့သောဆေးဝါးများသုံးစွဲခြင်းသည်အန္တရာယ်ကင်းသည်။ အချို့သောဆေးဝါးများသည်သင်သောက်သုံးသည့်အခြားဆေးဝါးများ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုတိုးပွားစေနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးဝါးများအားထိရောက်မှုနည်းစေနိုင်သည့်သင်၏သွေးအဆင့်ဆင့်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်အရိုးပွရောဂါဆေးပညာအကြောင်းသင်၏ဆရာဝန်အားပြောပြပါ။
ဒီစာရင်းကမပြည့်စုံဘူး ဆေးဝါးများ၊ ဗီတာမင်များနှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များအပြင်ဆေးဝါးများသည် Sunitinib Malate ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှမူးယစ်ဆေးဝါး interaction ကဒီမှာဖော်ပြထားသည်မဟုတ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နို ၀ င်ဘာလ ၁၆ ရက်တွင်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာနမှ nephrectomy ပြီးနောက်ထပ်တလဲလဲကျောက်ကပ်ဆဲလ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူနာများအားကုသမှုအတွက် Sunitinib Malate (Sunitinib Malate, Pfizer Inc. ) ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
nephrectomy အပြီးတွင်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်နေသော RCC ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားသောလူနာပေါင်း ၆၁၅ ဦး တွင်စင်တာပေါင်းစုံပါ ၀ င်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ မျက်စိကန်းသော၊ လူနာများသည် ၁: ၁ ကိုနေ့စဉ်တစ်ကြိမ်လျှင် ၅၀ မီလီဂရမ် Sunitinib Malate ဖြစ်စေ၊ ၄ ပတ်ကြာကုသမှုကိုခံယူပြီးနောက် ၂ ပတ်အကြာဖြစ်စေ၊ Sunitinib Malate သောက်သောလူနာများအတွက်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ရောဂါကင်းစင်စွာရှင်သန်နိုင်ခြင်းမှာ ၆.၈ နှစ် (၉၅% CI: ၅.၈ မရောက်ရှိပါ) နှင့် ၅.၆ နှစ် (၉၅% CI: ၃.၈၊ ၆.၆) နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာဝင်သောလူနာများ (HR = 615; 1% CI: 1) , 50; p = 4) ။ DFS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အချိန်တွင်ခြုံငုံ။ ရှင်သန်နိုင်မှုအချက်အလက်များသည်မရရှိနိုင်ပါ။
Sunitinib Malate အားအဖြစ်များဆုံးသောဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုများ (≥25%) မှာပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ astenia၊ ၀ မ်းလျှောခြင်း၊ mucositis / stomatitis၊ ပျို့ချင်ခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ် / ကျဆင်းခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်နာခြင်း၊ , dyspepsia နှင့် thrombocytopenia ။ အဆိုပါတံဆိပ်ကပ်ခြင်းတွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များနှင့်လူနာများအားအသည်းပျက်ဆီးမှုသို့မဟုတ်သေစေနိုင်သည့်အသည်းရောင်အသားဝါဘီရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့် ပတ်သက်၍ သတိပေးအကြောင်းကြားထားသည်။
RCC ၏ adjuvant ကုသမှုအတွက် Sunitinib Malate ၏အကြံပြုထားသည့်ဆေးပမာဏသည်တစ်နေ့လျှင် ၅၀ မီလီဂရမ်သောက်သုံးခြင်းနှင့်အစားအစာမပါဘဲ ၄ ပတ်ကုသမှုခံယူပြီးနောက် ၆ ပတ်သီတင်းပတ် ၂ ပတ်ကြာလျှင် ၂ ပတ်ကြာသည်။
မှတ်ချက်ချ: အပြည့်အဝသတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်မှာရရှိနိုင်ပါသည်:accessdata.fda.gov PDF ဖိုင်ရယူရန်။
စျေးကွက်တွင် Sunitinib Malate အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ / ထုတ်လုပ်သူများစွာသောကြောင့်ဤထုတ်ကုန်ကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေသောလူအားလုံးအတွက်စစ်မှန်သောအရာတစ်ခုရှာဖွေရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဈေးကွက်တွင် Sunitinib Malate အမှုန့်ကို ၀ ယ်ရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်ပိုမိုသိရှိရန်၊ ၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသိရှိရန်နှင့်၎င်းသည်လုပ်ဆောင်မှုယန္တရား၊ Sunitinib Malate အမှုန့်ကိုယူသောအခါမည်သည့်အန္တရာယ်ရှိသည်ကိုသေချာရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်စျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးသည်၎င်းကိုမ ၀ ယ်မီကျွန်ုပ်တို့၏စိုးရိမ်မှုများဖြစ်သည်။
စျေးကွက်မှအချက်အလက်များကိုလေ့လာပြီးနောက်၊ ပေးသွင်းသူများစွာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက AASraw သည် ၀ ယ်လိုသည့်သူများအတွက်ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် Sunitinib Malate အမှုန့်သူတို့၏ထုတ်လုပ်မှုကို cGMP အခြေအနေအောက်တွင်တင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသည်။ အရည်အသွေးကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ သင်မှာယူသောအခါစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာများအားလုံးပေးလိမ့်မည်။ Sunitinib Malate အမှုန့်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်စျေးနှုန်းအတွက်, ငါ့အမြင်ထဲမှာ, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်သင့်သည်။ ငါဟာကွဲပြားခြားနားတဲ့ Sunitinib Malate ပေးသွင်းသူများထံမှစျေးနှုန်းတော်တော်များများကိုရရှိခဲ့တယ်၊ အရည်အသွေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် aasraw ဟာရွေးချယ်စရာမကောင်းဘူးလို့ငါထင်တယ်
 အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု။ Sunitinib (Sutent) သတင်းအချက်အလက်သတ်မှတ်ခြင်း။ ၂၀၁၅
 CA Naranjo, U. Busto နှင့် EM Sellers, Clinical Pharmacology and Therapeutics, Vol ။ “ ဆိုးရွားသောမူးယစ်ဆေးဝါးတုံ့ပြန်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်းရန်နည်းလမ်း။ ” ၃၀ မဟုတ်ဘူး။ 30, စစ။ 2-239, 245 ။
 Z. အန်ဆာရီနှင့် MK ဂျော့ခ်ျ၊ “ မူးယစ်ဆေးဝါးသွေးဆောင်ပြီးကိုယ်ခံအား -mediat thrombocytopenia သည် sunitinib ၏အလယ်တန်းတွင် metastatic renal cell carcinoma နှင့်အတူလူနာတစ် ဦး - ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာများဂျာနယ်” ။ 7, ဆောင်းပါး 54, 2013 ။
 K. Sakai၊ K. Komai၊ D. Yanase နှင့် M. Yamada တို့သည်“ သွေးကြောဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများကိုရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ကုသရန်အမှတ်အသားအဖြစ် Plasma VEGF၊ ” Neurology, Neurosurgery and Psychiatry ဂျာနယ်၊ ၇၆၊ 76, ဆောင်းပါး 2, 296 ။
 ဥရောပဆေးဝါးအေဂျင်စီ။ Sunitinib (SUTENT) ။ ကုန်ပစ္စည်းဝိသေသလက္ခဏာများ၏အကျဉ်းချုပ်။ ၂၀၁၅
 Pajares B, Torres E, Trigo JM et al ။ Tyrosine kinase inhibitors နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများ - လက်တွေ့ကျသောအကြံပြုချက်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ Clin Transl Oncol 2012; ၁၄: ၉၄-၁၀၁ ။
 Teo YL, Ho ဟောင်ကောင်၊ Chan A. ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတုိုင်ယိုအားနည်းချက်များမှာ Tyrosine kinase inhibitors နှင့်အတူ: လက်ရှိနားလည်မှု၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အကြံပြုချက်များ။ Br J ကို Clin Pharmacol 2015; 79: 241-253 ။
 ဂျေမီ Dlugosch (2009-03-13) ။ "ဇီဝဗေဒနှင့် Sutent Pfizer ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်နည်း" ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ။
 BMJ 31-Jan-2009“ NICE နှင့်ကင်ဆာဆေးများ၏စိန်ခေါ်မှု” p271
 Blay JY, Reichardt P (ဇွန်လ 2009) ။ “ ဥရောပ၌အဆင့်မြင့်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်း stromal အကျိတ်: ပြုပြင်ထားသောကုသမှုဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း” ကျွမ်းကျင်သူ Rev Anticancer Ther ။9(6): 831-8 ။ Doi: 10.1586 / era.09.34 ။ PMID 19496720. S2CID 23601578 ။
9014 Views စာ
ရင်သားကင်ဆာကုသရန်အထိရောက်ဆုံးဆေးဝါးများကဘာလဲ။ အဆုတ်ကင်ဆာကုသရန်ဆေးဝါး ၇ မျိုးကို FDA ကအတည်ပြုခဲ့သည်